Izu a bụ ihe ịtụnanya dị ịtụnanya. Mụ na Chantelle gara akwụkwọ akwụkwọ gọọmentị mbụ anyị na-edebanye aha na ndị egwu dị egwu sitere na Wiley na Blog Indiana. Ọ bụ ezigbo ndị na-ekiri ndị na-ekiri akwụkwọ! M wee na-eji ụbọchị na-eme ememe na ọtụtụ ndị mmadụ ndị na-akwado, aka na enyi m na afọ - ọtụtụ depụta! Enwere m nnọọ ekele!
Ekem - ụbọchị ahụ ka mma mgbe m natara vidiyo Youtube a dị egwu Arthur VanWyk, a na-elekọta mmadụ mgbasa ozi marketer, blogger na ika ọkwọrọikọ si South Africa. Mụ na Arthur jikọtara onwe anyị na Twitter. Amaghị m ma akwụkwọ a ọ ga-adị na South Africa ma ọ bụ na ọ gaghị enwe ya mere anyị nyere iwu maka ya. Na o wepụtara oge iji kelee anyị ma tinye vidio a mere n'ezie ka m dọkatụrụ ntakịrị ọ happinessụ!
Tags: Arthur vanwykakwụkwọ kacha mmaịde blọgụ akwụkwọịde blọgụ maka dummieschantelle flanneryụlọ ọrụ ịde blọgụụlọ ọrụ ịde blọgụ akwụkwọụlọ ọrụ ịde blọgụ maka dummieszuru ụwa ọnụ